Kutheni iB2B yakho yokuThengisa ifuna iiNkqubo zokuLumkisa kwangoko Martech Zone
Ilizwi uyasnuza, uyalahleka Isebenza ngokuthe ngqo kwintengiso, kodwa ngelishwa ababaninzi abathengisi ababonakala bekuqonda oku. Rhoqo, balinda de kube ngumzuzu wokugqibela ukuze bafunde ngamathemba axabisekileyo okanye kumthengi okwi-cusp ekumkeni, kwaye oku kulibaziseka kunokuba nefuthe elibi kumgca ongezantsi wombutho. Yonke intengiso ye-B2B ifuna i inkqubo yokulumkisa kwangethuba oko kunceda ukujika kukhokelela kwiziphumo.
Incinci kakhulu, ilibele kakhulu
Abathengisi banamhlanje ngokubanzi balinganisa impumelelo yomkhankaso ngezivumelwano ezivaliweyo okanye nge-proxy yexesha elikufutshane, njenge Ukuthengisa okuKhokelayo okuFanelekileyo (Ii-SQL). Ingxaki koku kukuphinda-phindwe ka-4. Ukuqala, yiyo ukungahoyi kunye nengxelo ezingabasebenzisi ababandakanyekayo ngubani ongafuniyo ukuthetha noThengiso. La ngamathemba akhetha ukufumana ulwazi lwabo luzenzele ngokwakho kunokuba lubekwe kubo ngumthengisi wentengiso. Ngombulelo kubutyebi bolwazi olukwi-Intanethi, inani lezinto zokuzixhasa ziyenyuka. UGoogle uyifumene loo nto abathengi beshishini abaqhakamshelani nabathengisi ngokuthe ngqo de kube kugqitywe inkqubo yokuthenga engama-57. Aba bathengi abanakuhoywa. Kubandakanya iiseva zakho kuhlalutyo lomkhankaso wakho ziya kubonelela ngomfanekiso ochanekileyo wokusebenza kwephulo.
Okwesibini, ukujonga isikhokelo kamva kumjikelo wentengiso kwenza ukuthengisa kubonwe kwisigwebo kunye nokuziphatha kokuthengisa kwakhona. Ukuphinda komntu ngamnye kusenokungafuni ukuguqula izikhokelo ukuba abaqinisekanga ukuba lishushu ithemba, kuba iqhinga labo kuku jolisa ingqalelo kwezona zinto zintle kwaye ugcine amazinga abo okuguqula aphezulu. Abanye oorhulumente bangenza ngokuchaseneyo kwaye baguqule izikhokelo ngokulula, okanye benze njalo, kuphela emva kokujongana nentengiso. Uguquko oluninzi kakhulu lunokuyibaxa ukusebenza kwephulo, elinempembelelo apho intengiso yabela izixhobo zayo zexesha elizayo.
Kuzo zombini iimeko, ukuthengisa kugqityiwe kukuhlaselwa ngumjikelo wentengiso. Ukuthengisa kusebenza nzima ukuze kuveliswe izikhokelo, azikhathalelwa ukuphela kwekota njengoko ukuthengisa kugxile ekuvaleni izivumelwano, kunye nezikhokelo ziya ziphela. Eli linqaku elaziwayo lokuncamathela kwintengiso yentengiso.
Ingxaki yesithathu yokulinganisa impumelelo ngale ndlela yile Ukuthengisa kubhencwa kusilelo olunokubakho kwiinkqubo ezininzi, kubandakanya ukulandela umkhondo, inqanaba lentengiso, imiyalezo, njl. Umzekelo, masithi ukuthengisa kuqhuba umkhankaso omkhulu okhokelela kuthethathethwano olomeleleyo nesilingo sasimahla. Ukuba uphuhliso lwentengiso (SDR) alwenzi msebenzi ulandelayo (okt ukulinda ixesha elide, ukuthumela ii-imeyile ngempazamo yopelo, okanye ukungabi nambeko kwifowuni, njlnjl.), Okanye ukusilela ukubonakala kweziphumo ityala, emva koko linokuphela licinyiwe, ngaphandle kokusebenza ngamandla.
Ukuba ii-SQLs ezininzi zikhokelela kumanqanaba asezantsi okuguqula, abathengisi kufuneka bagxile kwimizamo yabo esezantsi kwisefaneli ukuze kuvalwe izivumelwano ezingaphezulu. Okokugqibela, iindlela ezikhokelayo zokufumana amanqaku zihlala zigweba kakhulu, ngamanqaku abelwe amathemba okucofa ii-imeyile, ukhuphelo, kunye notyelelo kumaphepha ewebhu. Endaweni yendlela yesayensi, ukukhokela amanqaku kuyeyona nto ingcono yokuqikelela.
Eyona ndlela ilungileyo kukuvumela isimilo sethemba lakho sisebenze njenge inkqubo yokulumkisa kwangethuba ukukuxelela ukuba amaphulo akho asendleleni eya empumelelweni. Oku kunokulinganiswa ngokusekwe kuvavanyo lwasimahla okanye ababhalisi be-freemium abasebenzisa imveliso yakho. Ewe kunjalo, usafuna ukulinganisa ukuba ngaba ziya kujika zibe zii-SQL okanye zibhatale abathengi, kodwa ukujonga le metric kutyhila ukuba yeyiphi ipesenti yamathemba abandakanyeka ngokwenene kwimveliso yakho kwaye ingeyiyo. Oku kubalulekile, kuba abathengisi kufuneka bazi ngokukhawuleza ukuba ngaba iphulo lizisa uhlobo olululo lwabantu. Ngale ndlela banokuma kwaye baphinde balungelelanise umkhankaso wokuqhuba kakubi ngaphambi kokuba ube semva kwexesha.
Ukufumana olu hlobo lokubonakala, kuya kufuneka usebenzise isixhobo sakho ukurekhoda isenzo somthengi kwaye emva koko ubophele kwiphulo abasuka kulo. Preact yenza oku kubonakala ngokuqokelela le datha, kwaye uyidibanise ne-Salesforce okanye iinkqubo zentengiso ezenzekelayo njengoMarketo kunye Hubspotke abathengisi banokuthatha amanyathelo ngokulula. Oku kuthetha ukuba akusayi kubakho kulinda de kube lixesha lokuba ungene.
Ukugcinwa komthengi licandelo elibalulekileyo lalo naliphi na ishishini, kodwa uninzi lweendlela ezifanayo zinokusetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba ithemba linamava amahle kwimveliso yakho. Indlela yethu yokunciphisa i-churn yabathengi ikwayindlela enamandla yokulinganisa kwangoko ngexesha lokuthengisa nokuba ingaba iphulo liyimpumelelo na. Oku kunika abathengisi ukuqonda okukhulu kwi-ROI yeenzame zabo, kwaye kubanika amandla okuba basebenze.
Iinkqubo zokulumkisa kwangaphambili
Kwamanye amasimi, iinkqubo zokulumkisa kwangaphambili zisetyenziselwa ukuthintela intlekele. Babamba izifo ngaphambi kokuba basasaze, balumkise abantu ngenkanyamba ezayo, okanye babone ubuqhetseba ngaphambi kokuba bonakalise. Nangona kunjalo iinkqubo zokulumkisa kwangoko zinokusetyenziselwa ukufumana umda kukhuphiswano kunye nokuhambisa i-ROI yokwenyani. Abathengisi be-B2B akusafuneki baxhomekeke kwi-intuition okanye balinde de kudlule ithuba. Idatha kunye nokuqonda ekuziphatheni kwabathengi kuxhobisa abathengisi ukuba basebenze ngakumbi, kwaye baqinisekise ukuba akukho khokelo lixabisekileyo lidlulayo.
tags: b2bUkuthengisa kwe-b2bamadili okuvalaisilumkiso kwangethubainkqubo yokulumkisa kwangethubaukuvelisa izikhokelopreactiintengiso ezifanelekileyo zikhokelelaizikhokelo ezingapheliyoisilumkiso
Uxanduva lwayo yonke impumelelo yoMthengi, iNkxaso, iiNkonzo, kunye nokuBambisana kwi Preact. I-Preact yinkonzo esekwe kwimpumelelo esekwe kubathengi enceda iinkampani zesoftware ukuba zonyuse ixabiso lokuphila kwabathengi ngokunciphisa i-churn, ukufumana abathengi abatsha abahlawulwayo, kunye nokunyusa ingeniso yomsebenzisi. Sebenzisa ukusetyenziswa kweemodeli kunye neepateni zokuziphatha usebenzisa uhlalutyo olukhulu lwedatha, isayensi yokuziphatha kunye nokufunda komatshini.
Umbuzo # 1 weeNjini zokuKhangela zaBasebenzisi baBuza malunga neShishini lakho
Iindlela ezi-3 zethekhinoloji ekufuneka abathengisi babukele kuzo ngo-2015